Gabar wariye ah oo lagu dilay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeGabar wariye ah oo lagu dilay Muqdisho
June 5, 2016 Abdi Omar Bile Home, Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Gabar wariye ahayd oo ka shaqayn jirtay idaacada dowlada Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaala Muqdisho.
Sagal Salaad Cismaan ayaa koox hubaysan ku toogteen kasoo horjeedka Jaamacada Plasma oo ay wax kabaran jirtay.
Sagal ayaa muddo labo sanno la shaqaynaysay idaacada dowlada ee Raadiyo Muqdisho sida ay Puntland Mirror u sheegeen asxaab warbaahinta katirsan.
Kooxihii dilka geystay ayaa ka cararay goobta.
Soomaaliya waxay safka hore kaga jirtaa wadamada ugu halista badan oo warbaahinta ka shaqayso.
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay ka qeybgalay Shir Weynaha Midowga Afrika maanta oo Axad ah. Madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyay Shirka oo ka dhacay xarunta Midowga Afrika ee [...]